Andro: 10 Oktobra 2019
Hangatahana fiantohana feno amin'ny fiantohana ara-pahasalamana ho an'ny olona TCDD sy DHMİ
Mpiandraikitra ny fitaterana-Sen, DHMİ sy Tale Jeneralin'ny TCDD amin'ny fanoratana taratasy ho an'ny mpiasan'ny fangatahana. Ny mpitarika ny fitaterana-Sen, Kenan Caliskan dia nilaza tamina fanambarana iray; "Ny fangatahana DHMİ sy TCDD'den mifandraika amin'ny latabatra fiantsoana iombonana anlaşıl [More ...]
Mansur Yavaş, Ben'ny tanàna ao Ankara ao amin'ny tanàna Metropolitan, dia manatanteraka ny fangatahana tanàna mahasoa amin'ny mpianatra. Ny ben'ny tanàna Yavaş dia manome vaovao tsara ho an'ireo mpianatra mianatra eto an-drenivohitra manomboka amin'ny fihenam-bidy amin'ny fitaterana rano, lalan'ny bisikileta ary karatra famandrihana. [More ...]
Ben'ny tanànan'ny Kayseri Metropolitan Memduh Büyükkılıç, nanomboka ny vanin-taona fahavaratra amin'ny fanavaozana ny trano lehibe eny amin'ny tanàna, hoy izy. Ny filoha Büyükkılıç, Baghdad Street dia vita ary havaozina ny asa dia omena ny besinimaro hoy ny rehetra. Metropolitan Munisipaly [More ...]
Torkia Machines Railway Corporation (TÜDEMSAŞ) avy amin'ny mpiasa an-trano roa voalohany locomotives nivavaka ho an'ny olona iray ny miaramila hamaky Surat al-al-Fath amin'ny ampahany eo anoloan'ny Booth. Ny Repoblikan'i Torkia State lalamby (TCDD) ho an'ny famokarana sy ny entana locomotives sarety [More ...]
Roa ny olona naratra tao anaty kamiao 1 tao Kütahya izay nianjeran'ny fiarabe mpitatitra entana ny haavo. Notaterin'ireo olom-pirenena ny loza teny an-toerana, nitondra ny naratra nankany amin'ny hopitaly ireo ekipa mpitsabo. Fantatra fa matotra ny toetry ny olona iray. 24274 ekspedition nampiasain'ny Machinist BC [More ...]
TÜLOMSAŞ Serivisy momba ny serivisy momba ny hain-trano TCDD nitarika fividianana vaovao momba ny lalamby sy ireo vaovao hafa mety ho liana aminy ianaoRayHaber Bulletin 25.01.2019 Tender Bulletin 25 / 01 / 2019 Tsy misy raki-tsoratra ho an'ny 25.01.2019 ao amin'ny rafitra.RayHaber 04.02.2019 Auction [More ...]
Manatanteraka hetsika ho an'i Uludağ ny governemantan'i Bursa
Bursa ny Biraon'ny Governora dia nanomana tatitra lava dia lava mitady ny andro taloha, Torkia voalohany Ski ala nenina. Ny tatitra, izay nanasongadina ny fanavaozana an'i Uludağ, dia natolotra teny Ankara. Tiorkia voalohany Ski ala nenina ny Uludag, nambaran'ny Praiminisitra Recep Tayyip Erdogan "mba xnumx't [More ...]
Ny talen'ny jeneraly fitateram-pitaterana TCDD Kamuran Yazıcı dia nanatrika seminera tao anatin'ny ambaratonga CD TCDD Transportation AŞ 2019 Year Training Term In-Service Training Program gerçekleştiril izay natao tao Kuşadası. Nanao kabary tamin ny mpandray anjara eto, i Yazıcı dia nanazava ny politikan'ny fitaterana izay narahina hatramin'ny 2003. [More ...]
7 Ny fidirana mora amin'ny oniversite teknolojia Gebze avy amin'ny tsipika samihafa
Iray amin'ireo mpiara-miasa amin'i Kocaeli Metropolitan Municipal, TransportationPark A.Ş. Manome serivisy fitaterana ho an'ny Gebze Technical University (GTÜ) miaraka amin'ny andalana 7 samy hafa. Miaraka amin'ireo fiara avy any amin'ny faritra samihafa, 7 dia manolotra ireo mpianatra ny serivisy fitaterana mora mankany amin'ny oniversite. Ny fitaterana sy [More ...]
Caravan Office Mobile ao Karamürsel
Kocaeli Metropolitan Munisipalin'ny departemanta misahana ny fitaterana sy fitaterana fifamoivoizana, ny kaomisera birao finday dia nanomboka namaha ny fitomboan'ny fitakiana ao amin'ny antontan-taratasim-pitaterana, dia napetraka tao amin'ny morontsirak'i Karamürsel. Handefa ny olom-pirenena hatramin'ny zoma any Karamürsel ny Office Office Caravan. HERINANDRO 1 [More ...]
Soraty ny sazy noho ny fandatsaham-bato ny helok'i Izmit
Kocaeli Metropolitan Munisipaly dia manohy ny ezaka ho fiarovana ny Izmit Bay. Amin'izany toe-javatra izany, ny fanombanana ny tatitra avy amin'ireo ekipa mifehy ny tontolo iainana dia namoaka ny sain-tsambo maina an-tsenan'i Izmit Cook Islandd Banda. TAMIN-DRATRA MAMPISORATA Kocaeli Metropolitan [More ...]
Çetin Emeç Manakaiky ny fiafaran'ny tetezana overpass
Kocaeli Metropolitan Munisipaly dia manohy mitondra fahatsiarovana vaovao sy maoderina ho any an-tanàna ary mbola manohy ny asany. Ny famokarana sy ny asa fanamboarana hafa dia mandeha amin'ny Çetin Emeç Overpass Bridge vaovao, izay napetraka tamin'ny tongotra ny vatany tamin'ny volana lasa teo. [More ...]
7 Olona an'arivony no nitsidika ny famintinana namoaka ny ho avin'ny famokarana
Fihaonambe Robot Investigation Summit sy 4.0 Fangatahana Fivoriana 1-3 Oktobra OktobraNyX ny daty 2019 natao tao Yeşilköy Istanbul. Ny famintinana ireo teknolojia famokarana dia notsidihin'ny olona 10 izay nitombo ny 7.064 isan-jato tamin'ny taon-dasa. Haino aman-jery indostria, voalohany indrindra 'famokarana amin'ny fandaharam-potoana [More ...]